Ihe omuma: ihe dị gị mkpa iji mara banyere aghụghọ na ịgha ụgha nke Internet
Egwuregwu Intanet bụ iji iwu software ma ọ bụ ọrụ ịntanetị eme ihe n'ụzọ iwu na-akwadoghịnke akụ mmadụ. Kwa afọ, a na-ezuru ọtụtụ nde ijeri dollar site na ebe nrụọrụ weebụ ịntanetị, ozi-e, na ihe ndị yiri ya. Ọtụtụndị na-agba ọsọ dị elu na-eji aha ndị na-ere ihe ọhụrụ eme ihe iji tụọ ndị ahụ a tara ahụhụ ma na-eburu ego ha na ịntanetị. Na oge nke oge,Njehie Intanet aghọwo nchegbu kachasị maka ndị nkịtị na ndị ọrụ mmanye iwu.
Ross Barber, nke Ọkachamara Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa, na-akọwa ihe dị mkpa gbasara ụdị ọrụ mpụ a.
Otu esi echedo onwe gi
Ọ ga-ekwe omume ichebe onwe gị na weebụ ma ọ bụrụ na ị maara ihe niile banyere ụdịnke internet aghụghọ. Kaadị akwụmụgwọ zoro ezo, ozi ịntanetị ndị a ma ama, lotteries, ebe a na-achọghị ịtụkwasị obi na ịzụ ahịa ụgha bụ ụdị nkịtịntanetị weebụ. Enweghị iwu ọ bụla iji nọrọ na nchekwa na ịntanetị; Otú ọ dị, ị nwere ike ichebe onwe gị site na ịchekwa kaadị nchekwa gị.Ọ dịkwa mkpa ka ị zere ịpị ihe mgbakwunye amaghị na anaghị eso aha njirimara ma ọ bụ paswọọdụ gị na ndị ọzọ.
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị ghọọ onye aja
Ọnụ ọgụgụ ntanetị dị na weebụ na-ebili n'ụbọchị ndị a, ya mere ọ dị mkpa ka ịburu ihe ole na ole n'uche:
1. Naanị aza ozi ịntanetị nke sitere na ID n'ezie. Ọ bụrụ na folda spam gị bụịnweta nọmba dị ukwuu nke ozi ịntanetị, ị ga-ehichapụ ha ozugbo o kwere mee.
2. I kwesiri icheta na obughi ezigbo oru choro ugwo, tinyere ugwo oru ntinye,ụgwọ ịgba ụgwọ, na ebubo nhazi..Ọ bụrụ na mmadụ na-enye gị ọrụ ma chọọ ka ị nyefee ego, enwere ike ịnweta yana-anwa ime gị ọnyà.
3. Ikwesighi ka onye obula kwuputa na i meriri ugha. Enweghịihe dị otú ahụ n'ịntanetị, ya mere ndị na-agba ọsọ na-ezube ịbata gị ma zuo ego gị.
Otu esi enweta ego gị azụ
Iwu Cyber ​​na-enye ego iwu na ụzọ iji weghachite ego gị. Ọ bụrụ na ị bụ andị na-eme ihe ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịkpọtụrụ Ụlọ Mkpesa Mkpesa na Intanet. Dezie mkpesa na ụlọ ọrụ a, ha ga-enyocha IPadreesị ego nke e zuru ego gị.
Ị nwekwara ike ịnye akwụkwọ nkwekọrịta nkesa nke onye ahịa gị na ụlọ akụ gị ka ị gaa n'ihuazụmahịa kwụsịrị. Maka nke a, ị ga-akpọtụrụ alaka ụlọ ọrụ gị dị nso ma nye ha nkọwa niile. Ụlọikpe ahụ nwere ike ịga n'ihuna-ajụ ajụjụ banyere mkpesa gị, a ga-anụkwa okwu a wee kpebie na itoolu na ọnwa iri na otu.
Ụdị ụdị aghụghọ nke ịntanetị
Nke a bụ ụfọdụ n'ime ụdị isi nke ịntanetị nke na ndị mmanye iwu na usoro iwundị ọchịchị na ndị na-azụ ahịa na-ahụ:
Atụmatụ nkwụsị na mkpọsaahịa Online
Ebumnuche aghụghọ na-apụtakarị na weebụsaịtị ndị na-ere ahịa iji dọta ọtụtụ mmadụ.Ndị na-agba ọsọ na-agbalị ịzụta ego gị site na atụmatụ ndị a site n'inye gị ego mara mma ma ọ bụ njem gaa mba ndị ọzọ.
Ohere imere ahia
Ọ bụrụ na mmadụ kpọtụrụ gị site na email ma nye ohere azụmahịa, enwere oherena ọ na-anwa ịra gị ọnyà. Enwetaghị ohere azụmahịa site na ID ID nzuzo.
Ịgba Ezu na Ụgha
Ụfọdụ atụmatụ aghụghọ nke Intanet na-agụnye izu ohi - ịchọta ma jiri yadata nke gi onwe gi n'uzo nke gunyere nduhie ma obu ugha Source .